Iji Ule na-akpaghị aka iji melite ahụmịhe ndị ahịa | Martech Zone
Nọ n'ihu mgbanwe na ngwa ngwa na nnukwu ụlọ ọrụ ngwa ngwa, dịka Salesforce, nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ma Salesforce na Akaụntụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji merie ihe ịma aka ahụ.
Iji AccelQ's agile quality management platform, nke jikọtara ya na Salesforce, na-emewanye ngwa ngwa ma melite ogo nke nsụgharị nke Salesforce. AccelQ bụ ụlọ ọrụ ikpo okwu na-arụkọ ọrụ ọnụ nwere ike iji rụọ ọrụ, jikwaa, gbuo, na nyochaa ule Salesforce.
AccelQ bụ naanị nyocha ngwa ngwa na njikwa na-aga n'ihu edepụtara na Ahịa Salesforce. N'ezie, ọtụtụ ndị ahịa ahịa Salesforce kwadoro maka AccelQ, n'ihi uru ọ wetara iji bulie usoro ịgbahapụ Salesforce ha. AccelQ gafere usoro nyocha siri ike iji depụta ya na Salesforce AppExchange. N'ezie, ọtụtụ ndị ahịa ahịa Salesforce kwadoro maka AccelQ, n'ihi uru ọ wetara iji bulie usoro ịgbahapụ Salesforce ha.
Ihe Nlereanya Ule Nlere zuru ezu
Akaụntụ bụ usoro nhazi ule zuru oke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịnyefe mmeju nke Salesforce. N'ịbụ nke dị n'ígwé ojii, AccelQ dị ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe ịtọ karịa Provar ma ọ bụ Selenium.
Ngwaọrụ dị ugbu a nke na-anwa igbochi ule Salesforce anaghị aga nke ọma n'ihi na ha enweghị ike iweta echiche azụmaahịa. Ma ha enweghị ike ijikwa ọrụ ọrụ ike Salesforce na ihe ndị dị na ya. AccelQ na-eme ka ngwa ngwa ngwa ngwa, na-akpaghị aka ma na-eme ka ngwa ngwa ngwa ahịa nke Salesforce jiri ya wuo Salesforce Universe, ihe nyocha pụrụ iche nke AccelQ maka ịkwado usoro okike nke Salesforce.
Salesforce nwere ike buru ihe siri ike na ọdịnaya web ya dị omimi, iframes, na Visualforce, ịkpọ aha ole na ole, yana mkpa ịkwado Salesforce's Lightning and Classic mbipụta. AccelQ na-ejikwa ihe ndị a dị mgbagwoju anya na akpaghị aka na-enweghị koodu dị na igwe ojii. Mmejuputa iwu na ntughari ya agbalitela ngwa ngwa n'ofe ndị ahịa nke AccelQ ebe ha na-enyefe azụmaahịa dị elu karịa na ọnụ ala dị ala.
AccelQ's Salesforce suites na-edozi nhazi usoro dabere na modul ma ọ bụ mgbanwe dabere, mgbanwe, igbu, yana nsuso ya na atụmatụ ahazi. Ọ na-ahapụ ụlọ ọrụ soro ikpe ikpe ikpe emere site na iji usoro azụmaahịa wee mee ka usoro nkwado ngwa ngwa na mgbanwe nhazi na-aga n'ihu na ntinye nke Salesforce ha.
Salesforce Content Pack na-eme ka ngwa ngwa ngwa ahịa Salesforce site na Salesforce Eluigwe na Ala, akụrụngwa asụsụ na-enweghị koodu, yana ike akpaaka nyocha nyocha. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike nweta ihe karịrị 3x osooso na usoro mmesi obi ike nke ntinye nke Salesforce.
Ule akpaaka na njikwa
AccelQ na-enye akụrụngwa nnwale nke na-acha ọkụ ọkụ ma dịkwa mfe, dị ka Salesforce. Ọ na-enye:
Ihe nlere anya nke ulo oru Salesforce na usoro ahia
Akpaaka-koodu nke dị mfe ma dị ike
Atụmatụ nyocha ọgụgụ isi na igwe ojii kpere arụ ọrụ na ntinye na-aga n'ihu
Nlekọta ule nyocha zuru ezu na nyocha nke arụpụtara maka nnwale nnwale niile
Agile dashboard maka igbu egbu na akuko zuru ezu
Ọzọkwa, AccelQ na-agbakwunye Selenium maka ụlọ ọrụ ndị chọrọ iji aka ha mee ihe nyocha nke Salesforce na Selenium, ọkachasị mgbe nyocha akwụkwọ naanị enweghị ike ikpuchi nnwale achọrọ maka nnwale nnwale.
Ngwa ndị e wuru na Salesforce dị mgbagwoju anya na ọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka iji nwalee Selenium. AccelQ na-enye ndị nnwale ohere ịmepụta ikpe ule maka Salesforce na ịdị nro ma na-akwalite ikike Selenium, na-eme ka ọ bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke nwere ike ịba uru, na nke bara uru.
AccelQ Salesforce Ule Nyocha
Otu onye ahịa Salesforce nyeere ndị ahịa azụmaahịa Salesforce nwere ikike nyocha zuru ezu na-arụ ọrụ na AccelQ
Onye ahịa ahụ, ozi zuru ụwa ọnụ, data, na ụlọ ọrụ nyocha nke dabere na UK, chọrọ ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ yana ogo na ịdị nkọ nke usoro njikwa mmekọrịta ahịa nke Salesforce. Ntinye ahịa Salesforce a dị oke mkpa maka azụmaahịa ahụ, mana n'okpuru ọnọdụ nkịtị, ule nyocha ga-eri oke akụ.
Ya mere onye ahịa choro:
Wepụta usoro nkwado azụmaahịa gafere usoro modulu isii dị iche iche
Jikwa mgbagwoju anya nke Salesforce Lightning njikwa maka akpaghị aka mmekọrịta
Belata ntuziaka nyocha site na ọtụtụ ụbọchị ruo awa ole na ole
Jiri nlezianya na-emeso okpokolo agba agba na akwụ ụgwọ na Salesforce ma zere mmezi n'elu
Kwado ndị otu azụmahịa ka ha rụọ ọrụ na akpaaka
Uru azụmahịa nke AccelQ, gụnyere:
Ngwa ngwa, ogo dị elu Salesforce
Effortgba mbọ nyocha ọtụtụ ụbọchị belata na awa ole na ole nke ịda ada akpaaka
Mbelata dị mkpa na ego na mgbalị
Modularity na-enyere mmepe aka maka usoro azụmaahịa ọhụụ na-eji ihe karịrị 80 pasent
Ndị ọrụ nyocha enyere ha aka ịhazi na ịzụlite akpaaka n'otu oge na ntinye atụmatụ ọhụrụ
Nka na ụzụ na uru ndị na-adigide
Agbakwunyere usoro kachasị mma na ụkpụrụ imewe iji dozie nchegbu na traceability
Ntugharị ndị ahịa na akpaaka na-achọ nhụjuanya ọzọ n'ihi mkparịta ụka na mmejuputa usoro. Ikike AccelQ bụ ihe pụrụ iche na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa eji arụ ọrụ na-enweghị ihe mgbagwoju anya na akụrụngwa. Na AccelQ, ụlọ ọrụ nwere ike inye ndị ọrụ azụmaahịa ha na ndị ọzọ metụtara aka ike ma nweta nhụta zuru oke na ogo nke ntinye nke Salesforce ha.
Ọnwụnwa efu nke AccelQ maka Salesforce
Tags: ịgbanweeakpaaka azụmahịa usoro nkwadoakpaghị aka regression uleazụmahịa usoro akpaakandị ahịaire ere ahịasalesforce ọdịnaya mkpọahịa àmụmàule ahịaseleniumakpaaka ulenjikwa ulena-anwale akpaakaike anya